WAXAAN HELNAA SIYAABO KALA DUWAN OO LOO YAQAAN "CHAMPIGNON" - MUSHROOMS
Siyaabaha barashada si ay u koraan boqoshaada
Haddii aad rabto inaad ku korto qolofta guriga, waxaad u baahan tahay inaad marka hore isweydiiso su'aalaha: maxay tahay iyo maxaad u leedahay? Ka dib oo dhan, si ay u bixiyaan casho quruxsan qoyska, sanduuqyo yar oo ku yaal dhulka hoostiisa ama sariiro beerta ku filan.
Laakiin haddii aad go'aansato inaad abaabulato wax-soo-saarka ballaaran, waxaad u baahnaan doontaa oo keliya meelaha ballaaran, qalab gaar ah, laakiin sidoo kale qalab, qalab, qiimo wax ku ool ah iyo kharashka shaqada, iyo weliba aqoonta. Qaab kasta oo boqoshaada sii kordhaya ayaa leh shaybaarkeeda gaarka ah, kaas oo laga wada hadli doono.
In beerta, beerta ama beerta
Horumarinta champignons ee aag furan ma ahan habka ugu fudud, maadaama boqoshaadan aysan jeclayn iftiin dhalaalaya. Sidaa darteed haddaad rabto inaad miisaanka ku sameyso xagaaga xagaaga, raadso meel ku taal hooska - beerta hoosteeda hoosteeda, ku xoortay geedo, raspberries ama gadaasha guriga. Sariirta sariirta ah waxaad u baahan tahay inaad dhisatid xayiraad si aad uga ilaaliso ciidda inaadan qalajin.
Inta aadan bilaabin shaqada goobta, waa inaad marka hore diyaariso compost for beerashada boqoshaada. Cuntada ugu fudud waa 12 kg caws, 8 kg oo ah digada ama qashinka. Qaybaha waxaa lagu dhejiyaa lakabyada qoryaha, ka dibna isku dar ah waa in la waraabiyaa maalin kasta, ka fogaanshaha qalajinta. Inta lagu jiro diyaarinta (22-25 maalmood), compost waa in lagu daraa dhowr jeer.
Carrada ku jirta sariirta la doortay waxay u baahan tahay in la xoqdo, miisaanka lagu beeray dusha sare, dabool leh lakabka compost 5-7 cm sare oo ku shub. Mustaqbalka, waxaad u baahan tahay inaad ku qoydo meeshii loo baahdo. Ka hor inta bilowga fruiting waa inay sugaan 2.5 bilood. Bixinta Champignon - 12 kg oo ah boqoshaada bishiiba laga bilaabo goob lagu qiyaaso 1 jibbaaran. m. Hal meel meedhaydhku wuxuu kori karaa ilaa shan sano.
Waa muhiim! Si looga hortago infekshinka adoo si toos ah ula xiriiraya carrada, compost beerta waxaa lagu dhajin karaa waraaqaha saqafka ama caag.
Xoogaa xiiso leh waa beerashada champignons oo sariir la mid ah. Si arrintan loo sameeyo, waxaad u baahan tahay inaad sariirta u diyaariso 1.5 m ballaaran, digada (lo'da ama faras) ku sii foornada ciidda iyo beerashada boorash ama dhalashada squash. Sariiraha waxaa lagu daboolay filim fara badan. Mycelium waxaa la beeray marka geedo qaado xididka. Khudaarta iyo boqoshaada ayaa isku mar kicin doona.
Haddii aadan garaneynin meesha aad ku heli lahayd mycelium likaha, ama aad rabto inaad isku daydo inaad naftaada u hesho, waxaad isku dayi kartaa habka soo socda, taas oo aad u baahan doonto boqoshaada lagu ururiyo jawiga dabiiciga ah. Waa in laga saaraa habka noocaas ah ee raadinta dhulka iyo mycelium ay ku jiraan lugaha.
Meesha aad ku nooshahay waxaad u baahan tahay inaad qodo daloolo leh qoto dheer 20-30 cm, buuxi isku dar ah digada iyo caws iyo ku shub 5-6 cm ee kaynta ama beerta beerta sare. Kala sooc boqoshaada la soo ururiyay mindi, ku faafi dusha sare ee dusha sare iyo dabool leh lakabka carrada. Boqolkiiba kowaad wuxuu soo muuqan doonaa bil gudaheed. Intaa waxaa dheer in ay boqoshaada taranta meelaha bannaan, iyada oo gargaar sariiraha gudaha hoose Waxaad kaloo bilaabi kartaa boqoshaada koraya. Iyada oo tiknoolijiyadaan, sariiraha waxaa la dhigayaa dabaqa daboolay caagag. Dhibaatooyinka habka ayaa ah qadar badan oo ah foosha gacanta, dhibta nadiifinta iyo suurtogalnimada sare ee faafidda cudurada iyo cayayaanka. Faa'iidada habkan ayaa ah kharashka ugu yar ee dhaqaalaha: uma baahnid inaad iibsato weelasha iyo boorsooyinka.
Waa muhiim! Champignons waxay noqon kartaa qayb ka mid ah qurxinta beerta, qurxiyey qaabka kaynta.
On shelp on
Tiknoolajiyada Dutch ee beerista champignon ee ku yaala qalabka waxay u egtahay joogitaanka qalab qaali ah oo qiimo jaban, qalabaynta habka farsamada. Habkani wuxuu ku habboon yahay shirkadaha waaweyn. Iyada oo caawimadeeda, aagga wax soo saarka waxaa loo isticmaali karaa si wax-ku-ool ah, meel lagu badbaadiyo.
Meelaha loogu talagalay champignons - kuwani waa cabsi isku mid ah, kaliya dhowr dabaqyo. Qalabka ama sanduuqyada waxaa lagu dhigaa roogag badan. Dhibaatooyinka habkan ayaa ah kharashka badan ee qalabka iyo faafidda cudurada ku salaysan hannaanka gogosha iyo rakibaadda.
Ma taqaanaa? Waxaa jira isbeddello dhowr ah oo soo saarka wax soo saarka adduunka. Habka Shiinuhu waa mid ballaadhan: sababtoo ah shirkadaha yaryar oo leh maalgelin hoose iyo shaqaale raqiis ah, natiijada, mugga wax soo saarku waa malaayiin tan. Maalgashiga dhexdhexaadka ah iyo qaar ka mid ah isticmaalka hawsha gacanta ayaa saldhig u ah hababka Maraykanka iyo Australia. Wax-soosaarka ugu sarreeya waxaa soo bandhigay shirkadaha Holland, oo ku salaysan maalgashiga ballaadhan iyo tiknoolojiga sare ee hababka.
Nidaamka weelka oo dhan guud ahaan loogu talagalay wax soo saarka miisaanka, laakiin ganacsiga. Qaabkani waxa uu si fiican u haystaa shirkado waaweyn, badiba shisheeye (Ameerika, Kanada). Waxay u baahan tahay maalgelin ballaadhan oo ballaadhan, ku dhowaad dhammeystirida qalabka geeddi-socodka (buuxinta iyo xoqidda compost, daboolida daboolka daboolka) iyo dhaqaale ahaan faa'iido badan oo soo-saarka wax-soo-saarka (kumanaan tan oo badeecada ah sanadkiiba).
Wixii beeritaanka boqoshaada, weelasha alwaaxda si gaar ah loola dhaqmo caaryada iyo fungi ayaa loo baahan yahay, taas oo substrate ah loogu talagalay champignons. Qaybaha kala duwan ee koritaanka fangaska waxay ku dhacaan qolal kala duwan, taas oo kuu ogolaaneysa inaad si wanaagsan u habeysid habka caafi-dhowrka (dhaqidda, nadiifinta) iyo kaydinta weelasha.
Si kastaba ha noqotee, qaabkan waxaa loo habeyn karaa xaaladaha guriga, haddii aad isticmaasho hal ama dhowr weel yar.
Waa muhiim! Qalabaynta geedi-socodka qashinka, mashiinnada casriga ah iyo hababka loo isticmaalo: waa wiqiga buuxinta iyo soo dejinta compost, shixnad si loogu soo dejiyo compost iyo sanduuqa qashinka, mishiinka loo xakameeyo ciidda, sprayer ku dhex socdo rack.
Recently, habka si fiican loo aasaasay ee beerashada ee bacaha filimka polymer. Waxay u baahan tahay maalgalin ka yar tan kabaha ama nidaamka shelf, waxaana loo isticmaali karaa ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah ama guriga. Ujeedadaas awgeed, alaabta dhirta khudradda leh, guriga digaaga ayaa ku haboon. Marka aad guriga joogtid, waxaa fiican inaad isticmaasho bacaha oo leh 25 kg.
Bacaha la buuxiyay iyo bacda ayaa loo dhigay meel fog oo loogu talagalay daryeel fudud. Bacaha sidoo kale waxaa lagu diyaarin karaa heerarka.
Markaad isticmaashid habkan, way fududahay in la baabi'iyo lafdhabarta infekshanka ama caleemaha, markaa waxaad si fudud u xiri kartaa ugana saari kartaa bacda dhibaatada, ilaalinta miraha oo dhan. Waxa kale oo ay fududahay in la baddalo bacaha leh mycelium la isticmaalo. Haddii aad dhisto xirxiray bacaha, waxaa suurtagal ah in la isticmaalo meelaha waxsoosaarka si wax ku ool ah (marka la barbardhigo safaf). Faa'iido la'aanta habka boorsada ayaa ah in ay adagtahay in la xiro baakadaha ku jira compost, laakiin maanta waxaad ka heli kartaa bacaha diyaarsan ee compost iyo miisaanka miisaanka lagu iibiyo.
Ma taqaanaa? Mushrooms si fiican u soo ururiyaan wareegsan, ma jaraan. Daadi godka madhan ee ciidda ku shub. Gacmaha iska dhaq ama isticmaal gacmo gashi ka hor intaan la goyn.
Qoob-ka-soo-saarka boqraal badan ayaa maanta hela xayawaanka diyaarka ah ee loogu talagalay beerista champignon ka soo substrate extruded. Badeecadaha waaweyn ee briquette, digada, kabaha abuurka, peat iyo balka ayaa lagu riixaa murgooyinka.
Faa'iidada ugu weyn ee habka waa la'aanta wax-soo-saarka compost, sidoo kale goobaha waaweyn ma ahan lagama maarmaanka u ah beerista boqoshaada, tan waxaa laga qaban karaa xitaa dalka. Maadaama dhismayaashu si buuxda u diyaargaroobayaan, beerashada miisaanka miisaanka looma baahna, waxay horeyba ugu jirtaa marxalad hore u kacsan. Miisaanka hal cutub wuxuu kala duwan yahay min 2.5 ilaa 20 kg.
Si aad ula shaqeysid shilalka noocan oo kale ah, waxaad isticmaali kartaa farsamada si aad u dalbato oo aad daboosho lakabka caaga ah, uma baahnid farsamo ah inaad ku riixdo compost. Su'aasha ah in la doorto compost briquettes waa in loo tixgeliyaa si taxadar leh, marka lagu daro qiimo macquul ah, waa inay ahaataa mid tayo sare leh. Isbeddelka ka kooban ama qaab-dhismeedku ma shaqeyn doono.
Blocks ayaa loo dhigaa si gaaban oo loogu talagalay roogagga iyo weelalka, iyo godadka ayaa lagu sameeyaa dusha sare. Si looga hortago unugyada qalajinta, waxaa lagu dabooli karaa burka, warqad ama filim. Marka barku la daboolo mycelium, waxaa lagu daboolay sonkorta iyo hawada ayaa la joojinayaa. Nadiifi cutubyada leh buufin si markaas qoyaanku uusan u gaarin substrate laftiisa. Dalagga ugu horreeya ee boqoshaada ayaa laga goyn karaa 2-2.5 bilood.
Ma taqaanaa? Iyada oo xaalado si habboon loo abuuray oo ka tagaya tufaax oo ah ciidda, waxaad u guran kartaa ilaa 200 kg of champignons, taas oo ah, soo noqoshada blocks waa 20%.
Hab kasta oo lagu beerayo musqusha ayaa leh faa'iidooyin iyo faa'iido darro, sidaas darteed waxaad dooran kartaa tiknoolajiyada ugu haboon adiga oo ka eegaya khayraadka iyo hadafyada la heli karo.